ကလိုစေးထူး: ၄၀၀ ...နဲ့ ၂ နှစ်
ဟား....။ တိုက်ဆိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အရမ်းဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ် တိုက်ဆိုင်မှုပဲ အကိုရေ။ ကျွန်တော့် တစ်နှစ်ပြည့်မှာ အစ်ကို ပထမဦးဆုံးရေးပေးခဲ့သလို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ အစ်ကိုရဲ့ ၄၀၀ နဲ့ ၂ နှစ် ပြည့်မှာ မထင်မှတ်ပဲ ကျွန်တော် ပထမဦးဆုံး ဖြစ်သွားပြီ...။ အင်းစေတနာတူလို့ ဖြစ်ရပ်တူ သွားတယ်ထင်ပါတယ် အစ်ကိုရာ....။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ပန်းတိုင်ကတူတာကိုး :) ။
ဘလော့လောကမှာ အစ်ကိုတို့ထက် လက်စွမ်းထက် အရာရောက်တဲ့သူလည်း ဘယ်သမှမရှိတော့တဲ့အတွက် ဘာမှ ဆုမတောင်းပေးတော့ဘူး (အစ်ကိုပြောသလို ပြောကြည့်တာ)။ ဒါပေမယ့် အပြင်လောက အတွက်တော့ အရေးအကြီးဆုံး တစ်ခုလောက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ချင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ပန်းတိုင်မှာ အမြန်ဆုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဆုံဆည်းနိုင်ကြပါစေလို့....။
p.s- အစ်ကိုက နှစ်နှစ်ဆိုတော့ ၀ိုင်းလုပ်ရင် အစ်ကိုက ဒကာခံ။ ဒါပဲ :P
Sep 20, 2008, 12:53:00 AM
Sep 20, 2008, 1:00:00 AM
ဘလော့ သက် ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီး ပို့ စ်ပေါင်း ၄၀၀ ပြည့်သွားတဲ့ အစ်ကိုကြီးရေ့ နောက်များမှာလည်း စာတွေ အများကြီးဆက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။ကျနော့်ရဲ့ညဉ်ဆိုးလေးတစ်ခုကြောင့် ကိုယ့်ဆီမလာတဲ့ ဘလော့မသွားပါဘူးလို့စိတ်ထဲမှာ တွေးမိပေမယ့် ကျနော် မလာပဲမနေနိုင် မှတ်ချက်တွေမပေးပဲ မနေနိုင်တဲ့ ဘလော့ကတော့ အစ်ကိုရဲ့ ဘလော့ပါပဲ မသိသေးတာတွေသိရ ကိုယ်မကြုံးဖူးတာတွေ တကယ့်ဖြစ်နေသလိုခံစားနိုင်အောင်ရေးသားနိုင်တဲ့ အတွက်လည်း လေးစားပါတယ် ။ မကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂါတွေထဲမပါလို့ တော်ပါသေးတယ်း) ၀န်ခံမလို့ကျနော့်အကြိုက်ဆုံးဘလော့ဂါက အစ်ကိုစေးထူး ဆိုတာ တစ်နေ့ တော့ ပန်းတိုင်မှာကျနော်တို့ဆုံကြတာပေါ့
Sep 20, 2008, 1:01:00 AM
Sep 20, 2008, 1:06:00 AM
ကိုစေးထူး ရေးသားခဲ့တဲ့ စာစုတွေအားလုံးထဲမှာ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးကတော့
အောက်တိုဘာ၁၂ရက်၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကရေးခဲ့တဲ့ ရွက်ကြွေတောထဲမှာ ဆိုတဲ့ ပိုစ်ပါပဲရှင်။
အချိန်ကာလ၊ ရာသီအပြောင်းအလဲကြောင့် မေပယ်ရွက်တွေဟာ စိမ်းရ၊ ၀ါရ၊ ညိုရပြီး ကြွေရ၊ဝေရပေမယ့် တစ်ပင်ထဲက ဖူးပွင့်ဝေဆာခဲ့တဲ့ အရွက်လေးတွေပါ။
Sep 20, 2008, 1:13:00 AM
ပို့စ် ၄၀၀ ဆိုပါလား..။
အတော် ခရီးရောက်ခဲ့၊ ခရီးပေါက်ခဲ့ ပြီပဲ။
နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ရင် ကိုယ်ခင်းတဲ့ လမ်းကလေးပေါ် လိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေကို အေးမြတဲ့ အရိပ်လဲ ပေးနိုင်၊ ဖြောင့်ဖြောင့်လဲ လျှောက်နိုင်စေ ခဲ့တယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလို လမ်းလေးပေါ်မှာ လျှောက်ရတာ အမလဲ စိတ်ချမ်းသာလို့ အမြဲလာလျှောက်မယ်။
ကြိုက်မိတဲ့ ဘလော့ဂ်လို့ သိရလို့ ကျေးဇူး အထူးပါ။ အကြံဥာဏ်တွေ လိုအပ်နေတုန်းမို့ သင်ယူဖို့ အသင့်ပါ။
Sep 20, 2008, 1:24:00 AM
Sep 20, 2008, 1:40:00 AM
စာကောင်းစာမွန်များကို တိုးလို့ ဖန်တီးရေးသားနိုင်ပါစေ..။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ :) :)
Sep 20, 2008, 2:38:00 AM
ပို့စ် ၄၀၀ နဲ့ ဘလော့သက်တမ်းနှစ်နှစ်ပြည့်..
ကိုမောင်မျိုးညွှန်ုလို့လာဖတ်ဖြစ်တဲ့ဘလော့လေးပါ.. အမြဲတော့မလာနိုင်ပေမယ့် လာဖြစ်တဲ့အခါ. စာတွေအတတ်နိုင်ဆုံးများများဖတ်သွားပါတယ်.. ဆက်အားပေးနေပါအုံးမယ်... :P :D
Sep 20, 2008, 2:42:00 AM
စိမ်းကား တာတော့မဟုတ်ဘူး အကိုကြီးရ
ကူညီကာဖေးလို့ မကူပေမယ့် ... ဆိုတာကိုအတော်လေးကြိုက်မိပါတယ်။
Sep 20, 2008, 3:22:00 AM
အစ်ကိုရေ ကျွန်တော်တို့ အစ်ကို့စာတွေကို အမြဲတမ်းဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘလော့ကိုမရောက်ဖြစ်တာလည်း
google reader ကနေတိုက်ရိုက်ဖတ်နေလို့ပါ။
Sep 20, 2008, 4:19:00 AM
၄၀၀ နဲ့၂ မှ....သည်...ကိုစေးထူးလျှောက်သော လမ်းကလေး အစဉ်ဖျောင့်ဖြူး သာယာစေ အဓွန့်ရှည်စေ .....
Sep 20, 2008, 7:07:00 AM
စာပေါင်းပေမွန် အများဂျီး ဆက်လက်ရေးနိုင်ပါစေသဒီး။
Sep 20, 2008, 8:13:00 AM
u နဲ့ y မှားရိုက်မိလို့.... :D
Sep 20, 2008, 8:14:00 AM
ဒို့ကိုစေးထူးက ခြေလှမ်းပေါင်းလေးရာတောင် ရောက်ခဲ့ပြီကိုး။ ရှေ့ဆက်ပြီး ပန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေခင်ဗျာ။ ဖတ်ခဲ့သမျှ တော်တော်များများကို ကြိုက်ပါတယ်။ ရင်ထဲအထိဆုံးကတော့ “လက်” ဆိုတဲ့ပို့စ်နဲ့ ဓါတ်ပုံပါပဲခင်ဗျား.....
Sep 20, 2008, 8:44:00 AM
ပို့စ်တိုင်းနီးပါး မဟုတ်ပေမဲ့ ပို့စ်တော်တော်များများကို
အရေးအသားရော အတွေးအခေါ်တွေက လေးစားစရာ ကောင်းပါတယ်။
Sep 20, 2008, 8:51:00 AM
၄၀၀ နဲ့ ၂နှစ်မြောက်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်။
အသံမပေးပေမယ့် အမြဲလာပါတယ် အကိုရေ
ကိုစေးထူးကြီး.. စာတွေများများ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေဗျာ..။
ပို့ စ်ပေါင်း ၄၀၀ ပြည့်သွားပြီး ဘလော့အသက် ၂ နှစ်ပြည့်သွားတဲ့.. စာရေး ကောင်းတဲ့ ကိုစေးထူး နောက်များမှာလည်း စာကောင်းစာမွန်များကို အများကြီး ဆက်လက် ဖန်တီးရေးသား နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။
Sep 20, 2008, 11:06:00 AM
"၄၀၀ နဲ့ ၂ နှစ်" ပြည့်မြောက် ဤအချိန်ကာလမှသည်
စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါသော စာကောင်းပေမွန်များ
Sep 20, 2008, 11:55:00 AM
We must reach to our goals in one fine day!
ကိုစေထူး ၂နှစ်ပြည့် ပို့ စ်၄၀၀ကနေ ဒီထက်ပိုပြီး အဓွန့် ရှည်ကြာစွာနဲ့ပို့ စ်ပေါင်းများစွာရေးနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းရင်း လာရောက်ဂါရ၀ပြုသွားပါသည်။
Sep 20, 2008, 12:01:00 PM
I don't understand why the ppl supporting to klusayhtue. Nth skill writing, nth know about how to use myanmar words,nth IT butalot of fans. Is thatablog culture???
Sep 20, 2008, 12:17:00 PM
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ အားပေးနေပါတယ်။ :)
Sep 20, 2008, 1:43:00 PM
ကိုကြီးစေးထူးရေ အစ်ကိုရဲ့ ၄၀၀နဲ့ ၂ နှစ်ပြည့် လေး အတွက် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါတယ်.. အစ်ကို ရဲ့ စာကောင်းပေကောင်းတွေ ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျနော်တို့လို လူငယ်တွေလည်း အားရှိတာပေ့ါ. .နောက်လာမဲ့ ပို့စ်တွေကိုလည်း စောင့်မျှော်အားပေးလျက်နော့်.... အစ်ကိုအတွက် ဂုဏ်ယူမိတယ်အစ်ကို အားလည်း ကျမိပါတယ်
You have many hardcore audiances.
Keep going till your last drop of blood
Turns into your last word with your last breadth!!!
Sep 20, 2008, 3:54:00 PM
ကိုစေးထူးရေ အသံတိတ်နေပေမယ့် အမြဲ ဖတ်ဖြစ်နေပါတယ်။ များများဆက်ရေး နိုင်ပါစေ...။
Sep 20, 2008, 8:25:00 PM
အခုလို ၂ နှစ်ခရီးကနေ နောင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ တိုင်၊ ၂၀၀ တိုင် အခုလို အကျိုးပြုစာကောင်း စာသန့်တွေနဲ့ ပန်းတိုင်ဆီ ခရီးဆက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဆန္ဒပြုဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး စုစုစည်းစည်းနဲ့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ community လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်ကြမယ်လို့လည်း ယုံကြည်ပါတယ်။
Sep 20, 2008, 10:46:00 PM
အမြဲလာဖတ်ပေမယ့် ကောမန့်ရေးခဲတာကိုတော့ နားလည်ပေးပါဦး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နိုင်သူ ဖြစ်ပါစေ...
Sep 20, 2008, 11:22:00 PM
၄၀၀ မှသည် ၄ သန်းဆီသို့
၂ နှစ်မှသည် နှစ်တရာဆီသို့
Sep 21, 2008, 1:03:00 AM
ဘလော့ဂ်တွေ သိပ်များမလာခင်တုံးက ကိုစေးထူးဘလော့ဂ်ကို ပုံမှန်ရောက်ပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ ဘလော့ဂ်ရေးသူတွေက အရမ်းများလာတော့ ကိုစေးထူးဆီအရင်ကလောက် မရောက်ဖြစ်တော့ပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့ရတာလေးတွေ အခြေခံပြီး ရေးသားတဲ့ ရသစာစု လေးတွေကို တော့ နှစ်သက်မိပါတယ်။
Sep 21, 2008, 7:44:00 AM
ကိုစေးထူးရေ .. အကျိုးရှိတဲ့ စာတွေကို အခုလိုပဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ။
တနေ့တော့ ပန်းတိုင်ကို အတူတူရောက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Sep 21, 2008, 7:57:00 AM
ပို့စ် 400 မှသည် 4000 သို့
2နှစ်မှသည် နှစ်20 သို့
Sep 21, 2008, 12:39:00 PM
အားပေးရင် ဆက်လက် အားပေးလျက်ပါ ကိုစေးထူးရေ။
ကျွန်တော်ကတော့ ဒီဘလောက်ကို အနဲဆုံးတစ်နေ.တစ်ခေါက်တော့လာလည်မြဲပါ။ နှစ်ပေါင်းရာပေါင်းများစွာ အကျိုးပြုစာများ ရေးနိုင်ပါစေလို. ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။။
Sep 21, 2008, 9:11:00 PM
ပြောင်မြောက်လှသော သင့်၏အားထုတ်မှု ကြိုးပမ်းမှု ၄၀၀ သည် သဘာဝတရားမှ လူတုိုင်းအား ညီမျှစွာပေးထားခဲ့သော နှစ်နှစ်မှ ကွဲပြားစွာ သင့်နှစ်နှစ်အား ပုိုမုိုထူးခြားစေခဲ့သည့်ဟု မြင်ပါသည်။ သတင်းများကုိုတင်ခြင်းဖြင့်မဟုတ်ပဲ အများအားဖြင့် ရင့်ကျက်သော အမြင်များအား အနုပညာမြောက်လှစွာ တင်ပြခဲ့သည့် သင်၏ ၄၀၀ သည် အံ့မခန်းအသိအမှတ် ပြုဖွယ် ပမာဏပင်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါ၏။
ဆုဝေရှေ့မှာ ၃၉ ယောက်တောင် ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ ဘာပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ အကိုရေးတဲ့ပို့စ်တွေ အများကြီး ထပ်ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။ ပို့စ် ၄၀၀ ကနေ ပို့စ်ပေါင်းများစွာအထိပေါ့...။
ဟိုး...ရှေ့က ပန်းတိုင်ကို ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ...
Sep 22, 2008, 12:41:00 AM
အမှတ်တယပါ..(ဒီပို့စ်ကို ဖတ်မိသူများဆီက အမှတ်တရစကား ဆိုလို့လေ) :P
၄၀၀...နဲ့ ၂နှစ်မှာ အမှတ်ရစေတဲ့ ပို့စ်ပေါင်းများစွာ ဖတ်ခွင့်ရခဲ့လို့ တကယ်ပဲ အမှတ်တယဏော်.. :)
Sep 22, 2008, 6:03:00 AM
မတူညီပေမယ့် ကွဲပြားကြတာမှ မဟုတ်တာပဲ အကိုရေ။
တခါတလေတော့ လာဖတ်ပြီးမှ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ပြီး ပြန်ခဲ့ရတာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါကလဲ လူညစ် သမိုင်းညစ်တွေကြောင့်လို့ မှတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျနော် စာရေးချင်စိတ် ပိုဖြစ်လာအောင် ဆွဲဆောင်ခဲ့တာ အကိုဘလော့လဲ ပါပါတယ်။ အရေးအသားကောင်းတွေကြောင့်လဲ လေးစား အားကျရပါတယ်။ ခုလို နားလည်မှုတွေနဲ့ ပိုရင်းနှီးသွားရလို့ ပိုဝမ်းသာ ကြည်နူးပါတယ်အကို။ ပန်းတိုင်ရဲ့ လက်တကမ်းမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ရပ်မိနေကြပြီ ထင်ပါတယ်။
Sep 22, 2008, 5:26:00 PM
စာတွေလာဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ကွန်မင့်မချန်ဖြစ်တတ်ခဲ့ဘူး၊ အမှတ်တယဖြစ်အောင် ချန်ထားလိုက်မယ် ဒီတခုတော့။ စာကောင်း၊ ပေကောင်းတွေ ဆက်လက် စောင့်မျှော်နေဆဲပါနော်။ အောင်မြင်မှု့ပန်းတိုင်ရောက်ရှိနိုင်ပါစေ။
အမှတ်တရ ရေးပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ၊ မောင်နှမတွေရဲ့ အားပေးစကားတွေကို ဖတ်ရတာ အားရကြည်နူးမှုကို အတိုင်းမသိအောင် ခံစားရပါတယ်။
ကျနော့်အတွက် ရှေ့ဆက်ပြီး စာတွေရေးဖို့ အားအင်တွေပါပဲ။ ကျနော် ထပ်ကြိုးစားပါဦးမယ်။
Sep 22, 2008, 10:54:00 PM
ကိုကြီး စေးထူးရေ... ထက်လည်း အကို့ ဘလောဂ့်ကို reader ယူဖတ်တဲ့ ပုံမှန် ပရိတ်သတ်ပါနော်.. နောင် နှစ်ပေါင်း များစွာ တိုင်အောင် ဘလောဂ့် ဂင်း နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်
Sep 23, 2008, 7:07:00 AM
it is only for you!!!
it was composed by Emily Bronte, the poet who I like most.
The garden-walk with weeds o'er grown,
I love them - how I love them all!
Sep 23, 2008, 8:53:00 AM
ကိုယ်အားကျလေးစားရတဲ့ ဘလော့ဂါတယောက်ရဲ့ နှစ်နှစ်ပြည့် ပို့ စ်၄၀၀ပြည့် မှသည် နောက် နှစ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာအထိ… ပို့ စ်ပေါင်းမြောက်မြားစွာအထိ… ဒီဘလော့ဂ် ကောင်းကင်ကြီးမှာ လင်းလက်တောက်ပပါစေလို့့… ဘလော့ဂ်လေးရော ဘလော့ပိုင်ရှင်ရော ကျန်းမာအသက်ရှည် ရွှင်လန်းပါစေလို့ … အရည်အတွက်ထက် အရည်အသွေးကို အလေးထားတဲ့ ကိုစေးထူးရဲ့ ပို့ စ်တော်တော်များများကို နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်… ဟိုးရှေ့ မှာ ပန်းတိုင်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်နေတုန်းပါပဲ ကိုစေးထူးရေ….
Sep 23, 2008, 9:31:00 AM
ညီမပင့်ဂိုးနဲ့ မတန်ခူးရေ...၊ နောက်ကျလဲ အမှတ်ရရရှိနေကြတာကိုပဲ ကျနော် ကျေနပ် ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။
Emily ...Thank you so much!
ခင်ဗျားလာ အသိပေးကတည်းက တခေါက်ရောက်ပြီး ဖတ်ပြီးပါပြီဗျာ။ ကွန်မန့်လည်း ရေးခဲ့ပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ထင်ခဲ့တာ။ ဒီနေ့ တယောက်က သတိပေးမှ အပြေးပြန်လာကြည့်မိတော့ ကိုယ့်ပျက်ကွက်မှုအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ စေတနာကော ၀ိရိယပါ အားကောင်းလွန်းလို့သာ ၂ နှစ်အတွင်း ခုလို ပိုစ် ၄၀၀ ရေးခဲ့နိုင်တာ အင်မတန် အားကျစရာပါဗျာ။
မြန်မာဘလော့လောကလေး ဒီထက်ပို စည်ပင်ဖွံဖြိုးပြီး ညီရင်းအကို မောင်ရင်းနှမစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ပျော်စရာကောင်းပါစေ
Sep 29, 2008, 6:20:00 AM
၂ နှစ် ပိုစ့် ၄၀၀ မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ပိုစ့်ပေါင်းများစွာ ရေးသားရင်း အောင်မြင်သော လူသားတစ်ဦး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်..
Oct 1, 2008, 1:19:00 PM
Ko say htoo nae Ko say htoo blogapaw reader tway ka ,,wish lote pay nay kya tar ,,
rita ka wish htet lote par tel,, ( tet nay tae ,,,tannn gyee twayyy,,myan myan kwar kya par say lo )
Jun 23, 2009, 2:42:00 AM